मानुषी लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड कहिले? क्यापिटलको यस्तो छ तयारी - जन आवाज
मानुषी लघुवित्तको आईपीओ बाँडफाँड कहिले? क्यापिटलको यस्तो छ तयारी
मानुषी लघुवित्त वित्तिय संस्था लिमिटेडले सर्वसाधारणका लागि निष्कासन गरेकाे साधारण सेयर (आईपीओ) काे बाँडफाँड कहिले हाेला भन्ने सबैकाे चासाेकाे विषय बनेकाे छ । लगानीकर्ताकाे यही चासाे मेटाउन हामीले कम्पनीकाे आईपीओकाे बिक्री प्रबन्धक नेपाल एसबीआई मर्चेन्टसँग कुरा गरेका छाैँ । क्यापिटलका अनुसार हिजाेसम्म शंकास्पद आवेदकहरूकाे छनाेट गरिएकाे छ ।
डाटा भेरिफिकेसनकाे काम आजसम्म सक्याएर प्री-अलाेटमेन्ट भाेलि गर्ने तयारी गरिएकाे छ । त्यसैले, सिडिएस र बाेर्डकाे अनुमति पाएमा सम्भवत: आइतबारसम्म बाँडफाँड सम्पन्न गरिने तयारी भइरहेकाे क्यापिटलले जनाएकाे छ ।
अन्तिम दिनसम्ममा २४ लाख ३ हजार ५५ जना आवेदकले ३ करोड ६ लाख ३२ हजार ४ सय ५० कित्ताको लागि आवेदन दिएका छन् । यो सर्वसाधारणका लागि माग गरिएकाे भन्दा ८३.१० गुणा धेरै हो । मागभन्दा धेरै आवेदन परेको हुनाले कम्पनीको आईपीओ गोलाप्रथाबाट बाँडफाँड हुनेछ । अन्तिम तथ्यांक हेर्दा ३६ हजार ८ सय ५९ जनाले मात्र सेयर पाउने छन् । बाँकी २३ लाख बढी आवेदककाे हात खाली हुनेछ ।